Saadaasha Doorashada Somaliland
Tuesday November 07, 2017 - 08:47:08 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Haddii doorashadu maanta dhici lahayd sidan bay iigu muuqataa. Runta iyo sida arrini noqon Ilaah keligiis ayaa ku caalim ah.
Saadaashani waxyaabaha qarsoon sida, kaadhadhka la kala iibsanayo, iyo ammuuraha badan ee maalinta doorashada dhici kara xisaabtoodu kuma jirto. Labada garab ee ugu cadcad doorashadani waxay kala haystaan laba xisaabood oo qaarkood runta ka durugsan yihiin.
Khabiir weyn Kulmiye ah oo aan waraystay wuxuu haystaa inay 400kun ku guulaysanayaan, halka aqoonyahan Waddani ahi badheedhay oo yidhi beel hebli hadday israacdo cid kale looma baahna.
Lambarrada buunbuuninta ah ee la faafinayaa waxay keeni karaan filashooyin been ah oo, haddii doorashadu caddaalad u dhacdo, qolada laga adkaadaa liqi kari waydo. Runta oo loo dhawaadaa waxay si cad u iftiimin kartaa khaladaadka iyo dhaca ka iman kara doorashada.
Dhaqdhaqaaqii aan toddobaadkii hore ku sheegnay Gobolka Saraar iyo Koonfurta Hargeisa way caddaadeen.
Saraar toddobaadkan ayay Hoggaanka Kulmiye ku baraarugeen, dhaawac joojinna ay deegaankaa ka bilaabeen.
Laascaanood awalba Muuse xisaabta ugumaan darin, sidaa darteed lambarka keliya ee isbeddelay waa kan Ciro. Dhacdadi Laascaanood iyo dhaawac-tirkii Waddani ee maalintii xigtay wuxuu ahaa gawrac siyaasadeed oo aan ka soo kabasho lahayn.
Koonfurta Hargeysa dacaayadaha Somaliweyn saamayn bay ku yeesheen, maalinta doorashadana waxa suuragal ah inay noqdaan gebi kale oo ku soo duma Kulmiye.
Guusha iyo Guuldarrada labada xisbi waxay taallaa deegaannada beesha madaxweynaha ee Sanaag, Togdheer, Saraar, Saaxil iyoTogdheer oo ah meesha Muuse Biixi isku hallaynayo. Waddani taageerada deegaankaa uu maanta ka haysto hadduu xejiyo waa la doortay.